Atụmatụ inyefe oge ikuku nke Phoney Davido na data bụ ọgbaghara - NCC
Atụmatụ Phoney 'Davido's Airtime and Data giveaway' bụ ọgbaghara - NCC
2 awa gara aga
Ụlọọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi nke Naijiria (NCC) adọọla ndị Naijiria ndị na-enweghị isi aka na ntị, ọkachasị nde ndị ahịa ekwentị na Naijiria, na atụmatụ viral "Davido Airtime and Data giveaway" bụ aghụghọ.
Onye na-ahụ maka telecom kwuru n'akwụkwọ ozi wepụtara ma kwado ya bụ onye isi ngalaba na-ahụ maka ọhaneze ya bụ Dọkịnta Ikechukwu Adinde, na o doro anya na a na-agbasa atụmatụ a n'obodo iji gwuo ndị ọha na eze aka ha dị ọcha, ọkachasị ọtụtụ nde ndị na-eji ekwentị na Naịjirịa, site n'itinye David Adedeji Adeleke n'isi. , nke a ma ama dị ka ihe ọma Davido.
Davido, onye Naijiria na-abụ abụ, onye na-ede abụ, na onye na-emepụta ihe, kwuru n'oge na-adịbeghị anya na ya ga-enye nde naịra 250 n'ụlọ ọrụ ụmụ mgbei na gburugburu obodo ahụ.
Agbanyeghị, n'iji mmesapụ aka Davido mee ihe, otu ndị na-ese ihe mepụtara mgbasa ozi viral aha ya bụ "Davido Airtime and Data Giveaway," na-ekwupụta na Davido na-enye "N'efu 5K Airtime na data ịntanetị 10GB nke netwọk niile" iji cheta ụbọchị ọmụmụ ya.
NCC nwetara ihe nrite ndị ọzọ maka nrụpụta usoro iwu
AfriWallStreet weputara Platform maka ndị ọkachamara na azụmaahịa Africa
Ngwọta ịkwụ ụgwọ dị mkpa maka ịnyagharị mgbawa Ecommerce
Converge II na-eme Nọvemba, Wed. Ọktoba 24, 2021
Dị ka Commission si kwuo, a na-agba ndị mmadụ ume ka ha mee ọsọ ọsọ na ijide onyinye ahụ site na ịpị njikọ ndị a kọrọ na ha jikọtara ha na netwọk netwọk ebe a ga-enye ha oge ikuku na data. Nke a bụ mgbakasị ahụ.
Ọ dọkwara ndị ahịa telecom aka na ntị ka ha ghara ịdaba maka mgbasa ozi ahụ ma ọ bụ aghụghọ ọ bụla ọzọ yiri ya, na-akọwa na mgbasa ozi ahụ bụ nke ahụ: ojoro social engineering emebere iji nweta nọmba ndekọ aha ndị mmadụ Mobile Station International Subscriber Directory (MSISDNs), nọmba eji achọpụta akara ekwentị. ozi nke mba ụwa na ndị ọzọ, nke ndị wayo nwere ike iji mebie ndị ahịa telecom na ndị otu ọha na-atụghị anya ya.
Maka nkọwapụta, MSISDN bụ naanị nọmba ekwentị ekwentị, yana nkọwa ndị ọzọ.
Nke a bụ nọmba n'ụdị nke na-achọpụta ndị debanyere aha/ndị nwe na GSM na netwọk mkpanaka ndị ọzọ. N'ihi nke a, o zuru oke ikwupụta na onye ọ bụla nwere ohere ma ọ bụ onye na-emeghị ihe n'eziokwu nwere ike iji nọmba ahụ na protocol jikọtara ya mebie nzuzo nke ezigbo ndị nwe nọmba ahụ site na izu ohi njirimara na atụmatụ ndị ọzọ.
N'ihi nke a, NCC na-ekwughachi ndụmọdụ ya tupu oge eruo ndị ahịa telecom ka ha kpachara anya na ka ha ghara izuike ha. Ọ bụrụ na nkwalite ma ọ bụ nkwekọrịta yiri ka ọ dị oke mma ịbụ eziokwu, ọ ga-abụrịrị.
FSD Africa Insurtech Accelerator Programme gbasaara West Africa
RegTech Africa na ndị ọzọ Ecosystem Initiatives na-achọ € 2.7M iji kwalite azụmaahịa.
Egypt Fintech Mmalite Hollydesk na-echekwa ego $325k tupu mkpụrụ
Zute ndị ọkà okwu maka Talent Summit Africa 2021
Nigerian Shared Mobility Startup Treepz nwetara $2.8M wee nweta Ugabus maka Mgbasa Ọwụwa Anyanwụ Africa